China traractive sprayer ụlọ ọrụ na-ebu ya | RY AGRI
RY3W boom sprayer suiable maka ụdị traktọ ọ bụla, ọ na-agbanwe agbanwe, ọrụ dị mfe, nke a na-ejikarị maka mkpochapụ ọrịa na pest ofcrops ahụhụ, foliar potassium na weedicide spray.
1.Pump: ụdị diaphragm. Mere nke ihe mgbochi nchara. Arụ ọrụ na PTO. Nrụgide kasịnụ na-eme ka o doo anya na osisi ahụ na-efesa ọbụna akwụkwọ ala dị ala.
2.Pressure akara: Site usoro akara, onye ọ bụla nozulu na-ekwusi ike otu nsogbu. Gbaa mbọ hụ na nke ukwu na àgwà nke ịgba. N'oge usoro ịgba spraying, a pụrụ ịchịkwa ọtụtụ ihe ịgba dị ka ọ dị mkpa.
3.Boom: mfe arọ. Ọ dịghị sagging / onwe-leveling, ike ọganihu. Fechaa nchara. Na-arụ ọrụ na ala siri ike, ọ nwekwara ike ijigide ọnọdụ kwụsiri ike ma nwee ọkwa ma nye otu sprayer edo edo na mkpo niile. Isi akụkụ nke ọganihu bụ foldable maka mfe njem. A na-ehichapụ ihe ọ bụla n'ime eriri rọba siri ike, a ga-enwe ike ịhazigharị ọdịiche dị n'agbata oghere ahụ n'etiti sentimita 15-30, a ga-enwe ike idozi ọganihu dị elu site na mkpanaka hydraulic na-achịkwa traktọ.
4.noloji: Mere nke inogide pụrụ iche plastic. Ọ nwere ike ịmepụta ụmụ irighiri 100-micron na nrụgide nke 40 pound kwa square inch. Ọ nwere ike igbochi ịgba ahụ ka ọ ghara ịpụta mgbe mgbapụta ahụ kwụsịrị, si otú a na-ezere ihe mkpofu,
Ozi ụgbọ njem
Ọ nwere ike ibufe ihe a ebe ọ bụla. N'ihi nha na ịdị arọ nke ihe ahụ, a na-atụ aro ka ị kpọtụrụ anyị maka ọnụego mbupu tupu ịzụta.
1. OEM Manufacturing welcome: Ahịa ika, Agba ...
2. Akụkụ ahụ mapụtara na ngwaahịa.
3. Anyị ga-aza gị ase whithin 24 awa.
4. Factory eleta, tupu Mbupu nnyocha, ọzụzụ ...
Nke gara aga: Osisi galik
Osote: Ogige Sprayer
Power Machinery-Mini traktọ